«Apple» iOS ongakhela kuso umsebenzi kuthandwa kakhulu namuhla iPhones kanye iPads, ngaphezu chips eziningi has esinye isici ezithakazelisayo - Multilanguage. Lokhu kusho khona entendeni yezandla zakho amasethi kakade izindawo esethiwe. Phakathi kwezinye izilimi, yebo, kwakukhona lapho indawo "esikhulu nesinamandla."
Akubalulekile kangako, lapho uthenga igajethi - ngisho ku-North Pole. In the izilungiselelo siyohlale isiRashiya uhlelo kanye ikhibhodi main. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi idivayisi luwele ezandleni kwabanye abasebenzisi, lapho kwasendaweni esibonakalayo lufrenyiwe ngolimi ngaphandle Russian.
Yiqiniso, izincwadi IsiZulu namanje ngandlela-thile Ngiyayibona, kodwa lokho okufanele ukwenze Eastern noma izinhlamvu Asian? Lapha futhi kukhona kombuzo: indlela yokumisa iPhone ukuze isiRashiya futhi ukwenza kube kobuhlungu kokubili igajethi, ngaphandle kokulimaza izilungiselelo zesistimu, umsebenzisi. Inkinga, mhlawumbe, akusilo ebukhali ngakho, kodwa olunye lwalo Ngalokhu stupor. Ngakho, sibheka indlela ushintshe ulimi i-iPhone, empirically. Njengoba kuchazwe ngezansi Site ngokuphelele zonke izinguqulo yezinto zobuchwepheshe, kuhlanganise iPads ngomakhalekhukhwini nama-iPod ne.
Uma lo mshini, ithengwa distributor esitolo, ukuthi ligcwele phama, bona ngakujwayela ungalokothi ke umbuzo kanjani ukushintsha ulimi i-iPhone, cishe iqedwe. Kwanele uvule idivayisi, futhi ngemva esibukweni wamukelekile uyobe ngokushesha aphonswe ingxenye yezwe yokuzikhethela futhi, ngakho-ke, lokhu kwenza kwasendaweni. Khetha ulimi ofuna ukuqhubeka ukusebenza yesikhulumi izinhlamvu ajwayelekile.
Futhi inothi wukuthi abaningi emazweni CIS ukusekela isiRashiya, kodwa umuntu ngamunye uhlukile kwasendaweni yasekhaya has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Ngakho, musa ukufunda lazy ukupheqa ngokusebenzisa izigaba futhi izifunda ukukhetha Russia, hhayi Armenia noma Kazakhstan. Inothi ku iphuzu le ukunakekela okukhethekile ngaphambi ukushintsha ulimi ku-iPhone.
Uma wawela ezandleni kwegajethi nge ezifakwe kwasendaweni engaziwa, kuyodingeka ukuba siqhubeke uholwe izithombe. Into yokuqala sithola ku-iPhone imenyu ne amagiya isithonjana, okusho kulungiselelwa. Okulandelayo ku-window esivula, chofoza ilebula ezifanayo, futhi flip ngokusebenzisa esibukweni phansi imibhalo iTunes-Wi-Fi. Kungakhathaliseki kwasendaweni leliphuzu iyohlale kusenzo izinhlamvu ngesiNgisi, ngakho ukudideka okuningi akufanele kube.
Sinesithakazelo kule nto kulo mugqa, okuyinto nje obhekene ukusebenza izilimi. Ngemva ngokuchofoza kuyoba ukuvula ewindini elisha, lapho une ukukhetha umugqa phezulu imenyu. Le nto kuvula uhlu zonke izilimi atholakalayo, phakathi okuzoba Russian.
Ngaphezu kwalokho amanothi chofoza ulimi olukhethiwe kwaze kwaba amabhokisi okwesibhakabhaka bese uchofoza isithonjana ekhoneni eliphezulu kwesokudla, lapho itholakala khona ngaphansi inkomba ibhethri. Lolu hlobo "Yamukela / Enter". Ngemva kwesikhathi ethile edingekayo ukuze indawo yokufaka, igajethi yakho kuzothatha ifomu ajwayelekile we-Russian. Uma kukhona okungahambanga kahle, futhi uma endaweni ethile ukuthi awukho, kungcono ukuvala bese uvule idivayisi futhi usuphinda kusukela ekuqaleni, kunokuzama siqhubeke sizulazule izinhlamvu. Gcina leli phuzu engqondweni, ngaphambi kokuthi ushintshe ulimi ku-iPhone.
Usimende Dry - It ezakhiwe okwakhiwa ngalo la mabhodi
Overbite? Uyothola Herbst okusungulile - idivayisi okuyiwona ayikho into engenakwenzeka!
Refinancing - yilesi isisekelo sesimiso somthetho wemakethe okwenza imali credit